Kivy: Application တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ Python အတွက်မူဘောင် Linux မှ
Kivy: Python အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ Framework
Luigys toro | | applications များ, GNU / Linux များ, ပရိုဂရမ်းမင်း
Python မှာတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ ၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးလူအများက၎င်းကိုသင်ယူရန်အလွယ်ကူဆုံးပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်ယူဆကြသော်လည်း၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည် အတော်လေးနိမ့်သောအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက် applications များ။ ၎င်းကိုကျော်ကြားသောဤဘာသာစကားဖြင့်ပရိုဂရမ်ဖြင့်လွယ်ကူစွာနှင့်ထိရောက်မှုရှိစေရန် Python အတွက်မူဘောင်သောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများအစုတခုနှင့်အတူ tools များဖြစ်ကြသည် ပရိုဂရမ်မာများကအချိန်တိုအတွင်းပိုမိုကောင်းမွန်သော application များကိုဖန်တီးနိုင်သည်.
Kivy ဒါဟာတစျဦးဖွစျသညျ Python အတွက်မူဘောင် ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူများကအသုံးပြုခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီး၎င်းသည် cross-platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးယနေ့ရရှိနိုင်သော input devices နှင့် protocols အများစုအတွက်အထောက်အပံ့ရှိသည်။
2 Kivy ကို Linux မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ
3 Kivy အကြောင်းကိုကောက်ချက်
Kivy တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Python အတွက်မူဘောင် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဖော်ရွေသောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့် multi-touch ဂုဏ်သတ္တိများရှိသောအသုံးချပရိုဂရမ်များတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုထားသောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် Multiplatform သည်အရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်သိရှိနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုမှအလျင်အမြန်ထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ။
Kivy သုံးပြီးတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Python ကို y Cythonအဲဒါပေါ်မှာအခြေခံထားတယ် OpenGL ES ၃.၁ ၎င်းသည် input devices များစွာကိုထောက်ပံ့သည်။ တူညီသောနည်းအားဖြင့်၎င်း tool သည်လုပ်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုထပ်မံထည့်သွင်းရန်အတွက်ကျယ်ပြန့်သောဝစ်ဂျက်စာကြည့်တိုက်များတပ်ဆင်ထားသည်။
ဒီအားကောင်းတဲ့ Framework ကကျွန်တော်တို့ကို Linux, Windows, OS X, Android နှင့် iOS ကိုရည်ရွယ်သည့် application များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြေခံအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းကောင်းများ၊ ကျယ်ပြန့်သောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်စွမ်းအားပြည့်သော API သည်၎င်းကို Python ပရိုဂရမ်မာအများစုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောမူဘောင်ဖြစ်စေသည်။
Kivy အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အသုံးဝင်သောဥပမာများစွာပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဝီကီတစ်ခုလုံးရှိသည်။ https://kivy.org/docs/ ဒီ tool ကို၏တပ်ဆင်အသုံးပြုမှုအတွက်သော့ချက် element တွေအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
Kivy ကို Linux မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ
Kivy ၄ င်းတွင်အမျိုးမျိုးသော distros များနှင့် operating systems များအတွက် installers များရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်သည် လင့်ခ်Kivy ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည် ဒီမှာ.
Python အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောမူဘောင်သည်အတွေ့အကြုံရှိသူနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအသုံးပြုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကိုလိုက်နာရန်နှင့်လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
ငါအမြင့်ဆုံးသောအလားအလာတစ်ခုမှာ input devices များနှင့် protocols အမျိုးမျိုးအတွက်မြင့်မားသောထောက်ခံမှုအပြင် operating systems အမျိုးမျိုးသို့ portable လုပ်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Python programmer များအချိန်သက်သာစေမည်မှာသေချာသည်။ နှင့်ပိုမိုထိရောက်ဖြစ်ကြသည်။
Kivy ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌တင်ထားသည် ပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်းများ၏ပြခန်း စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင်တဲ့အခါပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိအောင်ကူညီပေးမယ့်မူဘောင်ကိုသုံးပြီး Python အတွက်ဒီမူဘောင်ကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအကြံဥာဏ်ပေးတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Kivy: Python အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ Framework
Gregorio ros ဟုသူကပြောသည်
တစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဆောင်းပါး။ ငါဒေတာဘေ့စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးချရလွယ်ကူသောအရာအချို့ကိုရှာဖွေနေသည်။ ၎င်းတို့တွင် Zillions ပေါင်းများစွာနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများရှိသည်ကိုသိသည်။ သို့သော်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုအသုံးချစရာမလိုဘဲဂရပ်ဖစ်တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားနေသည်။ အနည်းဆုံးအဆင့်နိမ့်ဆုံးအဆင့်မြင့် Python ဥပမာအကြံပြုချက်များရှိပါသလား။ Kivy သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသည်၊ ၎င်းသည် database များနှင့်မည်သို့ပြုမူမည်ကိုငါမသိ။
Gregorio Ros အားပြန်ကြားပါ
ငါစမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မေးခွန်း: Python2or3ကိုဘာတွေတပ်ဆင်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
gPodder: ရိုးရိုး podcast client
Pragha ဂီတဖွင့်စက် - GTk ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြန်သောကစားသမား